ဗေဒင် Archives - MZB FAMILY
LifeStyle / ဗေဒင်
အသက် ၉၄ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည် မြကင်းတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကျည်လွဲ ဂါထာ
သကျတျော၉၄ နှဈရှိ သကျတျောရှညျ မွကငျးတောငျ ဆရာတျော ဘုရားကွီးကို တပညျ့ ကပ်ပိယ ကကလေးတှေ သနေပေါပွီ ဘုရား” လို့ လြှောကျထားလို့ မနကေ့ ဆရာတျော ဘုရားကွီး ပေးလိုကျတဲ့ ကညျြကှငျး ဂါထာပါ။ ဂစ်ဆ အမုမှိ ကို ဂဈဆအမုနျမှိ၊ တိတျထာဟိ ဟု ဖတျပေးပါလူတိုငျးရှတိလဲရှတျပါ။ စာရှကျမှာရေးပီးအကြီအိတျထဲထညျ့ထားပါ။ အိမျတှမှောလဲကပျထားကွပါ အားလုံးဘေးအန်တာရာယျကငျးကွပါစေ။ အခုလိုအခြိနျပေးပွီးဖတျရှုပေးကွတဲ့ …
News / ဗေဒင်
နက္ခတ်လပြည့်ချိန်တွင် အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ရာဟုအရိပ်မည်းဖုံးလွှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇေယျာကို (နက္ခတ်ဥယျာဉ်) က ဟောကြားထားပြီး …. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနန်းကျပြီး အထိန်းအသိမ်း ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ လာမည့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နက္ခတ်လပြည့်ချိန် နံနက် (၁) နာရီ (၁၈) မိနစ်အချိန်တွင် အင်္ဂါနှင့်ရာဟုဂြိုလ်များ ဒီဂရီတိက်စြာ ပူးယှဉ်ကြမည်ဟု …
မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်မည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်ဟောကိန်းထုတ်
မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်မည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်ဟောကိန်းထုတ်။လာမည့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ (တပေါင်းလဆုတ် ၂ ရက်) နက္ခတ်လပြည့်ချိန်တွင် အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ရာဟုအရိပ်မည်းဖုံးလွှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇေယျာကို (နက္ခတ်ဥယျာဉ်) က ဟောကြားထားပြီး။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနန်းကျပြီး အထိန်းအသိမ်း ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။လာမည့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နက္ခတ်လပြည့်ချိန် …
မြန်မာပြည်သူတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုပ်ကြဖို့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက်သူ့ဘာသာသူ ယတြာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အမိန့်ပြန်တမ်းဘယ်လောက် ပြင်းပြင်း စကြာဝတေးမင်းတောင်အမိန့်ပေးလို့ မရတဲ့ နတ်မင်းကြီး ၂ ပါးရှိပါတယ်။အဲ့နတ်မင်းကြီး ၂ပါးက လောကပါလနတ်မင်းကြီးနဲ့ သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီးပါ။မည်သူမဆို ဒါန သီလ ဘာဝနာ တစ်ခုခု ပြု ပြီးနောက်“လောကပါလနတ်မင်းကြီးနှင့် သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီး ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့ ခန္ဓာတာဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ” လို့ ၃ ခေါက်ရွတ်ပြီး အထူး …
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရား ဟောပြောတော်မူသော ဆုတ်ခေတ်
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရား ဟောပြောတော်မူတော် ဆုတ်ခေတ်။ခုလူတွေ ရှေးကနဲ့စာရင်တော်တော် ရိုင်းလာတယ်၊တော်တော် ဆိုးလာတယ်၊သို့သော် နောက်လာမယ့် လူတွေနဲ့စာရင်ဒါတွေ တော်တော် တော်တယ်နော်။ နောက်ပေါင်းရမယ့်လူတွေကလည်း ခုလိုလူမျိုး၊ခုလို ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ဆုတ်ခေတ်၊နက်ဖြန်ခါ ဒီထက်ဆုတ်မယ်၊နောက်နေ့ ဒီထက်ဆုတ်မယ်။တက်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့။ဆုတ်ခေတ်၊ဆုတ်တာက ရိုးရိုးဆုတ်တာမဟုတ်ဘူး၊တလိမ့်လိမ့်ဆုတ်နေတာ။များများမဟုတ်ဘူး၊နောက်ထပ် နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်နေကြည့်၊အဲဒီအခါ အခုလက်ရှိလူတွေကို ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။တစ်ဘဝနဲ့ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ပြီးတော့ ကျင့်နည်းကလည်းသာသနာနဲ့ကြုံမှ၊ တို့က သာသနာရှိနေတုန်း တခြားရောက်နေရင် ဒီနည်းသည် တို့နဲ့ မဆိုင်၊သာသနာ တို့နဲ့ …
ညနေကတွေ့လိုက်တဲ့ နိမိတ်ကောင်းတွေလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ မိုးတိမ်
ညနေကတွေ့လိုက်တဲ့ နိမိတ်ကောင်းတွေလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ မိုးတိမ် ထူးခြားပါတယ်အလွန်ကိုဆန်းကျယ်နေပါပြီ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ညနေပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိမ်ပုံစံပါဘဲ။ လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ထားတာပါ Photo Shopမဟုတ်ပါ။အမှန်တကယ်ပုံပါနော် ဒီပုံကိုတော့ ညီလေးတစ်ယောက်က ညနေခင်းအမေနဲ့အပြင်ထွက်ရာမှ အမှတ်မထင်မြင်တွေ့ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တာကတော့ Thet Zaw Accကဖြစ်ပါတယ်။နိမိတ်ကောင်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့ယူဆရတဲ့ နိမိတ်ထွန်းတောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘဲ လောကနတ်တွေက မြန်မာပြည်သူတွေ ပျော်ရွှင်ရကာ အနာဂတ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ပြီး ပြည်သူတွေအမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်ပါမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမည့် ကိုရိုနာရောဂါအကြောင်းကို မိုင်းဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပြီ
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမည့် ကိုရိုနာရောဂါအကြောင်းကို မိုင်းဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပြီ။ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါအကြောင်းကို ၊ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပြီဗျ။၁ ကမ္ဘာကပ် ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော်ကူးစက်ခံရမယ်။၂။ ၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁. ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ်ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ်။စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ်။ ဘုရားတရားမြဲကြပါ အဆိုးတွေလာမယ်။၂၀၂၂ မွ အကောင်းဘက်ပြန်ရောက်မယ်။ ၃ ။ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိူင်ငံဟာတစ်နိူင်ငံလုံးနီးပါး ကူးစက်မှု့အများဆုံးနဲ့သေဆုံးမှု့အများဆုံးဖြစ် ကာအလောင်းများတောင်လိုပုံပြီး …
ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာဖြစ်သောကိုင်ရိုသည်ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ရာမှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင်ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။ တစ်နေ့တွင်မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးရောက်ရှိလာလေသည်။ကိုင်ရိုမှခရီးဦးကြိုဆိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့်စကားစမည်ပြောလေသည် ကိုင်ရိုသည်ကားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကိုဟောကိန်းထုတ်ထားရာမှန်ကန်သဖြင့်နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များဖြင့်သိကျွမ်းလေသည် သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကားပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသောအချိန်ဖြစ်လေသည်။သံအမတ်ကကိုင်ရိုအားမေးလေသည် မစ္စတာကိုင်ရိုရေတခုလောက်ကူညီပါ။ဘာများလဲသံအမတ်ကြီး ။ အခုကကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပြီလေ။တို့အမေရိကန်တွေမဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူတိုက်လို့နိဂုံးချုပ်သွားပြီ ဒီနောက်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲသိချင်တာ။ကိုင်ရိုလည်းနာရီဝက်ခန့်ကြာသော်သံအမတ်ကြီးအားပြောလေသည် သံအမတ်ကြီးခင်ဗျနောက်အနှစ်၂၀လောက်ကြရင်နောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ဦးမယ်။ဒီထက်ပိုကြီးမားမယ်။လူတွေသေကြလိမ့်မယ်။အဲဒီစစ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ဟာ ၂၁ရာစုလောက်ထိစူပါပါဝါနိူင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်။သံအမတ်ကြီး။အိုးမိုင်ဂေါ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ (၁၉၂ဝခုနှစ်ကကမ္ဘာ့စူပါပါဝါသည်အဂ်လိပ် (ဗြိတိန်)နိူင်ငံ ဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကအမေရိကန်သည်ဘက်စုံတိုးတက်အားကောင်းလာသောနိုင်ငံအဖြစ်သာရှိသေးသည် သံအမတ်ကြီး။ဆက်ပြောပါဦးမစ္စတာကိုင်ရိုရေ။ကိုင်ရို။အိုး….နောက်တခုထူးခြားတာရှိသေးတယ်သံအမတ်ကြီး ဘာများလဲမစ္စတာကိုင်ရို။ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ကစူပါပါဝါနိူင်ငံဖြစ်သလိုစူပါပါဝါလူသားတစ်ဦးလည်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလူသားလဲကိုင်ရိုအမေရိကန်ကနေထွက်ပေါ်လာမှာလား မဟုတ်ဘူးဗျဘားမား(မြန်မာ)ကနေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ထိုအချိန်ကမြန်မာပြည်အားဘားမားဟုခေါ်ကြလေသည်။ဘယ်လိုစူပါပါဝါလူသားလည်းမစ္စတာကိုင်ရို ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေပြီးပူပန်မှု့တွေကို ဖြေဖျောက်ပေးမယ့်လူသားပါ။ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းကျိုးပြုမယ့်လူသားပါ ဘာသာရေးနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေတယ်ဗျ။သူဟာကောင်းမြတ်စစ်မှန်တဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုကမ္ဘာ့လူသားတွေထိတွေ့သိခွင့်ရအောင်ဖြန့်ပေးလိမ့်မယ် ၂၁ ရာစုအလယ်(၂၀၅၀)လောက်ရောက်ရင်အဲဒီလူသားဟာ ဘားမားနိူင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူသမ္မတဖြစ်ရင်ဘားမားဟာဘုန်းမီးတောက်လိမ့်မယ် အရမ်းကိုတိုးတက်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်။စက်မှု့လက်မှု့ စီးပွားရေးစစ်ရေး ပညာရေး အပြင်တခြားသောအရာတွေပါ …
ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှမျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက်အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုမနက်၆:၀၀ကနေ၁၀:၀၀အတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက်ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။Shareပြီး လုပ်ပါ၁ပတ်အတွင်းထူးခြားပါတယ်။ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ်ယတြာအလှုပာ ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက်အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါမိတ်ဆွေတွေကိုထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုမနက်၆:၀၀ကနေ၁၀:၀၀အတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက်ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် …